भूकम्प र जोखिम न्युनिकरण « Loktantrapost
भूकम्प र जोखिम न्युनिकरण
२ माघ २०७२, शनिबार ०८:०६
आज १८ औँ राष्ट्रिय भूकम्प दिवस । बि. सं. १९९० साल माघ २ गते आएको महाभूकम्पले पु¥याएको क्षतिको स्मरण गर्दै भूकम्पीय जोखिम न्यूनिकरणका लागि सचेतना फैलाउने उद्देश्यले २०५५ सालबाट नेपाल सरकारले माघ २ गतेलाई भूकम्प दिवसको रुपमा मनाउँदै आइरहेको छ ।
दिवस मनाउन सुरु गरेको १८ बर्षमा आइपुग्दा यो बर्ष भूकम्प दिवसको सबैभन्दा उपयोगी हुनेछ । यो बर्षको भूकम्प दिवसको उपयोगितामा गत बैशाख १२ मा गएको प्रलयकारी भूकम्पका कारण नै हो ।
२०७२ सालको आगमनको खुसियाली मनाउन नपाउँदै बैशाख १२ मा गएको ७ दशमलव ८ म्याग्नेच्युटको कम्पनले करिब ९ हजार मानिसको ज्यान लियो भने हजारौँको सङ्ख्यामा घाइते भएर अहिले पनि पूर्ण रुपमा स्वस्थ भइसकेका छैनन् । त्यस्तै बैशाख १२ को झट्काले लाखौ मानिस घरबार बिहिन भएर यो चिसो मौसममा पनि त्रिपालको भरमा दिन बिताइरहेका छन् ।
यो बर्षको भूकम्प दिवस ‘भूकम्प प्रतिरोधी घर संरचना, सुरक्षित नेपाल हाम्रो चाहना’ भन्ने मुख्य नाराका साथ मनाउन लागिएको छ । त्यससँगै बैशाख १२ को मुख्य कम्पन र त्यस पछिका पराकम्पनबाट ध्वस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि समेत जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले अर्को नारा पनि यस बर्ष तय गरिएको छ । ‘बैशाख १२ मा गइहाल्यो भूइँचालो, सुरक्षित पुनर्निर्माणमा जुट्ने हाम्रो पालो’ भन्ने नारालाई पनि आजको भूकम्प दिवसमा प्रयोग गरिएको छ ।
भूकम्प एउटा प्राकृतिक प्रकोप हो । यो परापूर्वकालदेखि मानव समुदायले भोग्दै आएको सबैभन्दा खतरनाक र अति बिनाशकारी प्रकोप पनि हो । नेपालमा बि.सं. १९९० को ८.३ म्याग्नेच्युटको भूकम्प नै अहिलेसम्मको ठूलो तीब्रताको मापन गरिएको छ भने सन् १९६० मा चिलीमा गएको ९.५ म्याग्नेच्युटको भूकम्प बिश्वकै सबैभन्दा तीब्रताको कम्पन मापन गरिएको छ ।
बिश्वका ठूला र बिनाशकारी भूकम्प आउने देशहरूमा एसिया भित्र कै देश इण्डोनेशिया पर्दछ । इण्डोनेशियामा सन् २००४ मा ९.१ म्याग्नेच्युटको भूकम्प गएको थियो भने सन २००५ र २०१२ मा ८.६म्याग्नेच्युट र सन २००७ मा ८.५ म्याग्नेच्युटको भुकम्प गएको थियो ।
भूकम्पीय जोखीमका दृष्टिले हाम्रो देश नेपाल बिश्वमा ११ औं स्थानमा पर्दछ । भूकम्प बारे पूर्वानुमान गर्न सकिने प्रविधि बिज्ञानले अहिलेसम्म कुनै आविस्कार गरेको छैन । भूकम्पको जोखिमबाट बच्नका लागि भूकम्पका बारेमा पूर्व तयारी नै अचुक उपाय हो । भूकम्प आफैँले मानिसको ज्यान लिने होइन । हामीले नै निर्माणका कमजोर संरचनाका कारण नै ठूलो जनधनको क्षति हुने गर्दछ ।
त्यसैले भूकम्पको जोखिम न्यूनिकरणका लागि सबैभन्दा पहिला आफु बस्ने घर नै भूकम्पीय दृष्टिकोणबाट बलियो बनाउनु पर्छ । संसारको सबै दुःखका बेला हामीलाई घरले साथ दिन्छ तर जब भूकम्प आउँछ त्यतिबेला आफैंले बनाएको अनि बर्षौदेखि आफु बसिआएको घर बिरानो हुन्छ र हामी भूकम्प आएका बेला घरबाट बाहिर निस्कन हतार गर्छौ ।
एक पटक सोचौँ, सबै दुखको साथी बन्न सक्ने घर संसारको सबैभन्दा ठूलो विपत्तिका बेला किन हाम्रो साथ छाड्छ त ? त्यसमा कहिँ न कहिँ हामी नै दोषी छौँ । अर्को पूर्व तयारीका रुपमा घर संरचना निर्माण गर्ने जमिनको छनौट पनि हो । सबै मापदण्ड पु¥याएर बलियो घर त निर्माण गर्छौँ तर त्यो घर बसेको जमिन नै भूकम्पीय दृष्टिले कमजोर छ भने पनि संरचना ध्वस्त मात्र हुँदैन मानिसको ज्यान पनि जान्छ । त्यसैले घर संरचना निर्माण गर्ने ठाउँका बारेमा पनि प्राविधिक जाँच जरुरी छ । र अर्को महत्वपूर्ण पूर्व तयारीका रुपमा भूकम्पका बारेमा आम मानिसमा जनचेतना नै हो । भूकम्प आउनु अघि, भूकम्प आइरहेका बेला र भूकम्प आइसकेपछि के के गर्ने र के के नगर्ने भन्ने बिषयमा आम नागरिक जति धेरै सचेत हुन्छन्, त्यति नै भूकम्पीय जोखिम कम हुने निश्चित छ ।
आम नागरिकमा ब्यापक सचेतनाका कारण नै साना ठूला गरेर सबैभन्दा धेरै भूकम्प जाने देशका रुपमा चिनिएको जापानमा ठूलो भूकम्प जाँदा समेत पनि ठूलो जनधनको क्षति हुँदैन । जापानबाट हामीले सिक्ने बिषय भनेको पूर्व तयारी नै हो ।
आज १८ औँ राष्ट्रिय भूकम्प दिवस मनाइरहँदा बैशाख १२ को कम्पनले परिवारका सदस्य घुमाएकाहरू, अङ्गभङ्ग भएकाहरू, त्यस्तै घरबार बिहिन भएर त्रिपालको बास भएकाहरूतिर फर्केर हेर्न जरुरी छ । उनीहरूको दुःखमा साथ दिँदा दिँदै भत्केका संरचनाको जतिसक्दो चाँडो पुनर्निमार्णमा जुट्न राज्यले ढिला गर्नु हुँदैन । भूकम्पको जोखिमलाई हृदयङ्गम गर्दै भविश्यप्रति सचेत हुने राष्ट्रिय सङ्कल्प गर्न सकिए मात्र यो दिवसको सार्थकता हुनेछ ।